Public Health in Myanmar: February 2009
Posted by မွန်းသက်ပန် (ဆေး-၁)6comments
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အတော်ပင် မှောင်နေပြီ။ ယူကေ ဆောင်းတွင်းမှာ ညနေ လေးနာရီကျော် ကတည်းက အမှောင်ထု လွှမ်းနေတာမို့ သူမ အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာ အမှောင်ထု သိပ်သည်း နေတတ် စမြဲ။ ဧည့်ခန်းထဲ ရောက်လာတော့ မီးခလုတ်ကို သူမ ဖွင့်လိုက်သည်။ သားလေးက တွန်းလှည်းလေးထဲမှာ အိပ်ပျော်နေတုန်း စာအမြန် ဖတ်ဦးမှ။ ညနေ အလုပ် ဆင်းသည်နှင့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်မှာ ကပျာကယာ မုန့်ဝင်စားပြီး၊ ညသန်းခေါင်ထိ ဖွင့်တဲ့ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှာ သန်းခေါင်ချိန်ထိ စာထိုင်ဖတ် ပြီးမှ အိမ်ပြန်လာလေ့ရှိတဲ့ အတိတ်ဘ၀လေးကို သတိရမိသွားသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်သည့် အခါတိုင်း သက်မဲ့စာအုပ်တွေ မဟုတ်တော့ဘဲ သက်ရှိ စာအုပ်လေးကို ဖတ်နေဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်နှစ်တောင် ကြာလာခဲ့ပြီပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ဒီညတော့ သက်မဲ့ စာလေး ထိုင်ဖတ်ဦးမှပါလေ။
သို့ပေမယ့် သူမ စိတ်ကူးတို့က ချက်ချင်း အကောင်အထည် ပေါ်မလာ။ မီးခလုတ် နှိပ်ပေမယ့် မီးက လင်းမလာခဲ့။ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် ပြန်လုပ်ကြည့်သည်။ အိပ်ခန်းထဲက မီးခလုတ်ဖွင့်ကြည့်သည်။ ဒီတော့မှ အဖြေက ပေါ်လာသည်။ ဧည့်ခန်းထဲက မီးလုံးလေး ကျွမ်းသွားသည်ပဲ။ ညကြီးမင်းကြီး စတိုခန်း ဖွင့်ပြီးလဲ မီးလုံးသစ်နဲ့ လှေကားလဲ သွားမယူချင်။ သားပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာလဲ မထိုင်ချင်။ ဒီတော့ အကြံထုတ်ရသည်။ ထမင်းစား စားပွဲပေါ်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ ထွန်းလေ့ရှိသည့် ဖယောင်းတိုင်လေး ရှိနေတာမို့ အဆင်ပြေသွားသည်။ လူပင်ပန်း၊ စိတ်ပင်ပန်းနှင့် သိပ်ပင်ပန်းသည့် ညများမှာ မီးညှိပြီး အနားယူဖို့ ထားထားသည့် အနံမွှေးသော ဖယောင်းတိုင်လေးများကလဲ ရှိသေးသည်။ အားလုံး ထွန်းညှိလိုက်တော့ စာဖတ်လို့ ရလောက်သည့် အလင်းရောင်လေး ရလာသည်။
သူမ ဖတ်ဖြစ်သည့် စာအုပ်က Raymond Lamont-Brown ရေးသားသည့် Kamikaze ဆိုတဲ့ စာအုပ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက မဟာမိတ်စစ်သင်္ဘောများပေါ်သို့ လေယာဉ်များ ထိုးစိုက်ချပြီး အသေခံ တိုက်ပွဲဝင်သွားသည့် ဂျပန် အသေခံ ဆာမူရိုင်းများ အကြောင်း ရေးထားသည့် စာအုပ်။ ဒီလို စာအုပ်လေးတွေကို သူမ စိတ်ဝင်စားသည်။ အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီများ။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဆိုပြီး ရန်သူကို အသေခံ ချေမှုန်းသွားသည့် အဆိုပါ ဆာမူရိုင်းများ၊ တိုင်းပြည် ကံကြမ္မာအတွက် ရန်သူ သေနတ် ပြောင်းဝရှေ့ကို လက်နက် တစ်စုံတစ်ရာ မပါဘဲ တိုးဝင်သွားရဲခဲ့ကြသည့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒပြသူများ၊ ယုံကြည်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ကြိုးစင်ထက်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လှမ်းတက်သွား ခဲ့ဖူးသည့် တော်လှန်ရေးသမားများ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဖြစ်ပွားနေသော အသေခံ ဗုံးဖောက်ခွဲမှု လုပ်နေသည့် အစွန်းရောက်များ။ သူတို့အားလုံး၏ ကလေးသူငယ် ဘ၀ ဖြတ်သန်းမှု စိတ်နေစိတ်ထား၊ ကြီးပြင်းခဲ့ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ သူတို့ ဘ၀မှာ သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့သည့် အတွေးအခေါ်တွေ၊ တွန်းအားတွေ၊ ဒါလေးတွေကို လေ့လာပြီး တစ်နေ့ကျရင်တော့ သုတေသန လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက်လေး တစ်ခု လုပ်ဦးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားမိသည်။ ဒါကြောင့်လဲ ပတ်သက်သမျှ စာအုပ်စာတမ်းလေးတွေကို သီအိုရီ ရှုထောင့်မှ မဟုတ်ဘဲ၊ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အတိတ်ဘ၀လေးတွေ အထိ စိတ်ဝင်တစား လေ့လာနေမိသည်။
ကလော့စ်ဝစ် ဆိုခဲ့ဖူးသည့် friction ဆိုတဲ့ လွဲချော်မှုလေးတွေဟာ စစ်ပွဲများတင် မကဘဲ နေရာတိုင်းမှာ ရှိသည် ထင်ပ။ စာအုပ်လေးကို ကိုင်ပြီး ဖတ်မယ် လုပ်ခါမှ အစီအရီ ထွန်းထားသည့် ဖယောင်းတိုင်လေးတွေကို ကြည့်မိရင်း သူမ အတွေးထဲသို့ တစ်စုံတစ်ရာက ချဉ်းနင်း ၀င်ရောက်လာသည်။ ပထမ အစကျတော့ တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်လေး။ နောက်တော့ မွေးရပ်မြေ။ နောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဒီလိုနဲ့ အတွေးတွေက တစ်စတစ်စ ကျယ်ပြန့်သွားရင်း လတ်တလော ဖြစ်နေကြသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ဆိုင်ရာ ငြင်းခုံ ဆွေးနွေးနေကြမှုများဆီ အတွေးက ရောက်သွားသည်။
ဒီစကားလုံးလေး သူမ အတွေးထဲသို့ ခိုဝင်လာခဲ့သည်မှာ သူမ ငါးနှစ်ခန့်က ဖြစ်မည် ထင်သည်။ ဒီတုန်းက တီဗွီမှာ မြန်မာသတင်းကလဲ မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့်သာ ပြသည်။ နိုင်ငံတကာ သတင်းကလဲ ခဏတာမျှသာ။ သို့ပေမယ့် အဖိုးနဲ့အတူ နိုင်ငံတကာ သတင်း ကြည့်ဖို့ ထိုင်စောင့်ရတာက ထိုစဉ်က အလုပ်တစ်ခု။ ဒီအချိန်ကာလက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း သတင်းများမှာ အီသီးယိုပီးယား ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှု ပြဿနာက နေရာယူ လွှမ်းမိုး ထားသည့် ကာလ။ ရွက်ဖျင်တဲလေးတွေ။ ကလေးငယ်လေးတွေ။ ပုံရိပ်များက သူမ နှလုံးသားထဲ တိုးဝင် လာခဲ့ကြသည်။ ဘာမှန်းတွေ သေချာ မသိပေမယ့် အဖိုး ပြောပြနေသည့် ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှု ပြဿနာ၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုသော စကားလုံးလေးတွေကိုတော့ မှတ်မှတ်ရရ သတိရနေ ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ကျောင်းသူ ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ မေမေ ခေါ်သွားဖူးသည့် အေအိုင်ဒီအက်စ် ပညာပေးပြပွဲများ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာပေး ပြပွဲများကို ရောက်ခဲ့ရ ပြန်သည်။
သူမသာ ဆေးကျောင်းပြီးအောင် တက်ဖြစ်ခဲ့လျှင် နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဘာသာရပ်ကို အထူးပြု ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော အခြေအနေ အရ နောက်ပိုင်းကာလ ပြည်ပမှာ ကျောင်းပြန်တက် ဖြစ်တော့ ငယ်စဉ်က စိတ်ဝင်စားမှုလေးများကို သေချာ လေ့လာခွင့် ရလာခဲ့တော့သည်။ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ တက်ဖြစ်တော့ အဓိက သင်ရမည့် သုံးဘာသာအပြင် နောက်ထပ် ငါးဘာသာကို ကြိုက်ရာ ရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ မဆိုင်းမတွပင် political economy အထူးပြု ကဏ္ဍမှ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ (Health Economics), ပညာရေးဆိုင်ရာ (Economics of Education), ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ (Development Economics), ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ (Defence Economics) နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ၊ မြို့ပြဆိုင်ရာ (Regional & Urban Economics) တို့ကို ရွေးချယ်လေ့လာဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သုတေသနဘွဲ့များ ဆက်တက် ဖြစ်သွားတာမို့ နိုင်ငံရေး၊ စစ်မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတွေမှာ သုတေသီ ဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကတော့ သူမရဲ့ research interests အနေနဲ့ ရှိနေခဲ့ဆဲ။ Public Health and Civil Wars in Burma ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေး တစ်ခု သုတေသနလုပ်ဖို့ စပြီးမှ လိုချင်တဲ့ data တွေ အစုံအလင် မရနိုင်တာမို့ ရပ်ထားရ ပြန်သည်။ data မစုံလျှင် Information Bias ရှိနေလိမ့်မည်။ သုတေသီ တစ်ယောက်နဲ့ ၀ါဒ ဖြန့်ချီရေးသမား တစ်ယောက် ထမ်းဆောင်ရမယ့် တာဝန်ချင်းက သဘောသဘာဝ မတူညီတာမို့ အချက်အလက် မစုံဘဲနဲ့တော့ သူမ မလုပ်ချင်ပါ။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကြောင်း စဉ်းစားရင်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကဏ္ဍရဲ့ အရေးကြီးဆုံး လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်ခုဖြစ်သော ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးသို့ သူမ အတွေးများက ရောက်သွားသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ချမ်းသာ၊ ဆင်းရဲ ကွာဟမှု ကြီးထွားနေသရွေ့၊ အခြေခံ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကို နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား အားလုံး ခံစားခွင့် မရှိနေသရွေ့၊ လူတစ်ဦးအတွက် နေ့စဉ် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်သည့် အစာအာဟာရကို လူသားတိုင်း စားသောက်ခွင့် မရှိ နေသရွေ့ အဆိုပါ နိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် နေပြီဟု ပြော၍ မရနိုင်ပါ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသည့် ကမ္ဘာ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အစီရင်ခံစာ အရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေးသည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၏ အခြေခံ အကျဆုံးသော ရည်မှန်းချက် တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ချဉ်းကပ် နည်းလမ်းများနှင့် ပေါ်လစီများ၊ ပါဝင်ရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ အဖွဲ့များကို ပညာရှင်များက macro level, meso level, micro level ဟူ၍ အဆင့် ၃ ဆင့်ခွဲ၍ ဆန်းစစ် သတ်မှတ် ကြပါသည်။
ထိုအဆင့် အနေဖြင့် အဓိက ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရမည့် ချဉ်းကပ် နည်းလမ်းနှစ်ခုမှာ စီးပွားရေး အရ တည်ငြိမ်မှု(economic stabilization) ရှိလာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရန် အတွက် စီးပွားရေး ပေါ်လစီတွင် exchange-rate depreciation ပေါ်လစီဖြင့် ညှိယူရပါမည်။ သွယ်ဝိုက် အခွန်များ မြှင့်တင်ခြင်းကို မပြုလုပ်ရပါ။ ဤနည်းလမ်းကို ယူဂန်ဒါတွင် (၁၉၉၀)တွင်လည်းကောင်း၊ မော်ရေးရှတွင် (၁၉၈၀)မှ (၁၉၈၂)အထိ လည်းကောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားတွင် (၁၉၈၀)မှ (၁၉၉၇)အထိ လည်းကောင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ နောက်တစ်နည်းမှာ social capital တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရမှ reputation for trust ကို တည်ဆောက် ရပါမည်။
ဒီအဆင့်တွင် ချဉ်းကပ် လုပ်ကိုင်နည်း သုံးနည်း ရှိပါသည်။ ပထမတစ်နည်းမှာ လုပ်အား အသုံးပြု ကဏ္ဍများသို့ အရင်းအမြစ်များကို လွှဲပြောင်း အသုံးပြု ရပါမည်။ ထိုသို့ လုပ်ကိုင်ရန် လုပ်ငန်းငယ်များ အများအပြား ပေါ်ပေါက် လာစေရန် အားပေး ဆောင်ရွက်ရမည်။ အစိုးရမှ အခြေခံ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။ တောင်ကိုးရီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများတွင် ဤနည်းလမ်း အသုံးပြု၍ အောင်မြင်မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ နည်းလမ်းမှာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ခွဲဝေ သုံးစွဲမှုများကို ပြန်လည် ပြုပြင်ရေး ပြုလုပ်ရပါမည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပမှု ပပျောက်ရေးကို ဦးတည် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ စီးပွားရေး ကဏ္ဍများတွင် လုပ်အား အခြေပြု သီးနှံများ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင် နည်းပညာများ (ဥပမာ - မိုက်ခရို ဟိုက်ဒရို) စသည်တို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးကို ဆောင်ရွက် ရပါမည်။ Informal sector များကိုလည်း ထောက်ခံ အားပေး ရပါမည်။
တတိယ နည်းလမ်းမှာ ကဏ္ဍမျိုးစုံအတွက် လူမှုရေး ရံပုံငွေများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုရံပုံငွေများမှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနှင့် ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ရေ အရင်းအမြစ် စသည်တို့ အတွက် နိုင်ငံတကာမှ လှူဒါန်းသော ရံပုံငွေများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုရံပုံငွေများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် institution autonomy တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ပါသည်။
ဒီအဆင့်တွင် ချဉ်းကပ်ရမည့် နည်းများကို ပညာရှင်များက ခြောက်နည်းခန့် ခွဲခြား ဖော်ပြထားပါသည်။ ပထမတစ်နည်းမှာ social safety nets များ ဖြစ်ပါသည်။ အန်ဂျီအိုများမှ ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကများမှ ဖြစ်စေ အခြေခံ အစားအသောက်များ ပြည့်ဝစွာ ရရှိစေရေး၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး စသည်များကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယတစ်နည်းမှာ Public employment ပရောဂျက်များဖြစ်ပါသည်။ လုပ်အားခြေပြု လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဖြစ်စေရပါမည်။ တတိယနည်းလမ်းမှာ ထွက်ကုန်နှုန်း မြင့်မားသော သီးနှံများအား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ဒေသမှ တောင်သူများကို စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အရေးအလွန်ကြီးသော နောက်ထပ် နည်းလမ်း တစ်ခုမှာ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲဝေမျှတခြင်း (Asset Redistribution) ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများဘက်မှ ဘက်လိုက်သော လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မလွဲမသွေ ပြုလုပ် ရပါမည်။ ကျေးလက်ဒေသ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပြုလုပ်ရပါမည်။ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရေးကြီးသော water rights ကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ထံသို့ ချေးငှားမှု ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် လွှဲပြောင်း ပေးထား ရပါမည်။
ထိုမျှ မကသေး။ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဖြစ်များသော financial exclusion ကို ဖယ်ရှားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ (ဥပမာ - ကြွေးမြီ ဈေးကွက်ကို အောက်ခြေသို့ တိုးချဲ့ခြင်း) စသည်များကို ပြုလုပ် ပေးရပါမည်။ အုပ်စုလိုက် ချေးငှားခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပြီး၊ အာမခံထားခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း စသည့် risk management devices များကိုလည်း ဆောင်ရွက် ထားရပါမည်။ ထို့အပြင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ပရိုဂရမ်များကိုလည်း တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက် ရပါမည်။
အဆိုပါ အချက်များမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး၊ ပပျောက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများနှင့် ပေါ်လစီများ ဖြစ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ ကျမ်းတစ်စောင် မဟုတ်၍ အသေးစိတ်ချဲ့ကာ မပြောချင်တော့ပါ။ ထိုအချက်များအား ပြန်လှန် စဉ်းစားနေမိရင်း အတွေးများက လက်ရှိ အငြင်းပွား နေကြသော ကိစ္စရပ်များဆီသို့ ရောက်သွားခဲ့ ပြန်သည်။ ဒီလူတွေ ဘာအတွက်ကြောင့်များ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် မလုပ်ဘဲ ငြင်းခုန် နေကြပါလိမ့်လို့ သူမ တွေးနေမိ ပြန်သည်။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ။
မြန်မာပြည် အရေးမှာ စစ်အုပ်စုကို တိုက်ခိုက်ရန် မလို။ လက်တွေ့ကျသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်သည့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပမှု ပပျောက်ရေးတို့ကိုပဲ လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု အချို့က ဆိုနေကြပါသည်။ နအဖ အတိုက်အခံထဲမှ တချို့ကလဲ စစ်အုပ်စုကို တိုက်ခိုက်ရန် လိုသည့် အဆိုကို ပြောကြရင်း စစ်အုပ်စု ပြုတ်ကျမှ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ရမည်လိုလို အဆင့်ထိ ရောက်ကုန်ကြသည်။ နှစ်ဖက်လုံးက သူ လုပ်တာ ထိရောက်တယ်၊ ကိုယ် လုပ်တာ ထိရောက်တယ် ဟူ၍ ငြင်းနေကြ ပြန်သည်။
အမှန်တော့ ပေါ်လစီ ရေးရာများ၊ ချဉ်းကပ် နည်းလမ်းများကိုသာ လေ့လာထားလျှင် ငြင်းစရာ လုံးဝ မလိုတော့သည့် အချက်ပင် ဖြစ်သည်။ micro level မှာ တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ဖွဲ့ချင်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်လို့ ရသည့် ကိစ္စများ ရှိပါသည်။ ထို့အတူ macro level, meso level များမှာ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က စေတနာ ရှေ့ထားပြီး တစ်တပ်တစ်အား ဦးဆောင် အကောင်အထည် ဖော်ပါမှ လုပ်လို့ ရသည့် ကိစ္စများလည်း ရှိပါသည်။ စစ်အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရာ ကာလ တစ်လျှောက်တွင် စစ်အသုံးစရိတ် ကြီးမားမှု၊ စစ်မျိုးစစ်နွယ် များမှသာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု၊ စီးပွားရေး ပေါ်လစီများ၊ ဘဏ္ဍာရေး ပေါ်လစီများ ထိရောက်စွာ မချမှတ်နိုင်မှု ဆိုသည့် အားနည်းချက်များကို ပြည်သူတို့ ခါးစည်း ခံနေကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ရန် စစ်အုပ်စုအား မဖယ်ရှားဘဲ မရပါ။ (စကား အသုံးအနှုန်းကို ရှင်းစွာ ပြောထားပါသည်။ စစ်အုပ်စုဟု သုံးထားပါသည်။ တပ်မတော်ဟု မသုံးထားပါ။ တပ်မတော်ဟူသည် နိုင်ငံတစ်ရပ်၏ ပြည်သူ၊ အစိုးရ၊ စစ်တပ် ဆိုသော ဖြစ်တည်မှုသဏ္ဍာန် သုံးရပ်တွင် ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်၍ တပ်မတော်ကို မည်သူကမှ ဖယ်ရှား၍ မရပါ။ တပ်မတော်ကို တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်သည့် ပုံသဏ္ဍာန် အနေဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ် အနေဖြင့် သွတ်သွင်းနေသည့် စစ်အုပ်စုနှင့် စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ခြင်းကိုသာ ဆိုလိုပါသည်)
သို့ဖြစ်ရာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် (ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ဖြစ်၊ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်) ရှိနေသရွေ့ macro level ပေါ်လစီများကို ထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်၍ ရမည် မဟုတ်ပါ။ meso level အချို့နှင့် micro level အပိုင်းတွင် လုပ်လျှင် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ထိရောက်မည်များလည်း ရှိပါသည်။ မြန်မာများ အနေနှင့်က မြန်မာပြည်ကို စေတနာ ရှိသည်ဆိုလျှင် အဆိုပါ အဆင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွား မနေသင့်ကြပါ။ micro level နှင့် meso level လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စိတ်ဝင်စားသူများ တကယ် လုပ်ကိုင်ကြပါ။ (တစ်ခုတော့ ရှိပါသည်။ ဘာမှ မလုပ်ဘဲနှင့် macro level ကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် အတွက် စစ်အုပ်စုကို တိုက်ဖျက်နေသည့် အတိုက်အခံများကိုတော့ အကြောင်းမဲ့ လိုက်လံ တိုက်ခိုက် မနေပါနှင့်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အချိန်ကုန်ပါသည်။ လုပ်စရာ ရှိတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်ရန်သာ ဖြစ်သည်)
ထို့အတူ တိုင်းပြည် ခြွင်းချက် မရှိ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် လိုအပ်သည့် macro level ပေါ်လစီများ ချမှတ်နိုင်ရေး အတွက် စစ်အုပ်စုကို တိုက်ရမည့် သူများကလည်း အာဏာရှင် စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေး အတွက် အားစိုက် ကြိုးပမ်း တွေးဆရင်း လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ကြရမည်။ သူ့ဘာသာသူ လူမှု ထောက်ကူ ကိစ္စ လုပ်သူများကို နိုင်ငံရေးထဲ မပါလို့ ဟူ၍ သွားရောက် တိုက်ခိုက် ပြောဆိုခြင်း မပြုလုပ်မိစေရန် သတိထား ကြရမည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဘက် တိုက်နေကြလို့ကတော့ ဘယ်တော့မှ မပြီးပါ။ ဆေးရုံ ဆရာဝန်က ဆေးကုပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပေါ်လစီ ရေးဆွဲသူများက ကျန်းမာရေး စီမံကိန်းများ ချမှတ်ပါသည်။ အားလုံး ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်ဖြင့် အကျိုးပြု နေသူများ ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေ တစ်ခုကို တွေးကြည့်ပါ။ ဆရာဝန် ရှိပြီး ဆေးရုံနှင့် ဆေးဝါးများ မရှိပါက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို မည်သို့ စောင့်ရှောက်မည်နည်း။ ထို့အတူပဲ ပေါ်လစီသမားများမှ ပေါ်လစီချမှတ်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်မည့် ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများ မရှိပါက မည်သို့မည်ပုံ ဆောင်ရွက်ကြမည်နည်း။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်။ ကျောင်းဆရာများရှိပြီး သင်ရိုးနှင့် ပညာရေး စီမံကိန်းများ မရှိပါက မည်သို့ ဖြစ်နေမည်နည်း။ စီမံကိန်းများ ရှိပြီး ဆရာမရှိပါက မည်သို့မည်ပုံ စာသင်ကြ မည်နည်း။
ယခုကိစ္စများမှာလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ “ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ရမည်။ အတိုက်အခံများ လုပ်နေသည်မှာ အကျိုးမရှိ” ဟု ပြည်ပတွင် ငုတ်တုတ် ထိုင်ရင်း ဝေဖန် လေကန် နေသူများသည် မြန်မာပြည်တွင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသေးခြင်း မရှိကြောင်း သေချာလှ ပေသည်။ စစ်အုပ်စုနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ စေတနာရှင်များ ကြုံတွေ့နေတတ်သည့် အခက်အခဲများ၊ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးကိုတောင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပြုလုပ်၍ ခွင့်ပြုချက်ယူရမှုများကို မသိနားမလည်၍ “ငါ့စကားနွားရ” ပြောနေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သားဆက်ခြားရေးအတွက် တစ်အိမ်တက်ဆင်း ပညာပေး ဟောပြောမှုများကိုပင် နိုင်ငံရေး အရောင်ပါမှာစိုးလို့ ဆိုပြီး၊ ရ၀တ၊ ကြံ့ဖွံ့တစ်ယောက်မှ တစ်ကောက်ကောက် လိုက်နေသည့် အခက်အခဲမျိုးကို ကြုံတွေ့ဖူး ပါရဲ့လား။ နွမ်းပါးသည့် ရွာငယ်လေးမှာ ညနေပိုင်း အခမဲ့ ကျုရှင်လေး ဖွင့်ဖို့ကိုတောင် အဆင့်ဆင့် လပေါင်းများစွာ ခွင့်ပြုချက်တင် နေရပြီး၊ ပညာသင်နှစ် ကုန်သွားသည် မျိုးကိုကော ကြုံဖူးပါရဲ့လား။ စီးပွားရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ကိစ္စများ မဟုတ်သေး။ လူမှုရေး၊ ပညာရေးတွင်တောင် ဤမျှအထိ ကန့်သတ် တားမြစ်ချင်များနေသော စစ်အုပ်စုအား ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားနေခြင်းကို လိုက်လံ တိုက်ခိုက်ပြောဆိုနေသည့် ထိုလူများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပဲ လုပ်ဖို့ လိုတယ် ပြောနေသော စကားသံများရဲ့ စေတနာမှာကော တကယ် မှန်ကန်ပါရဲ့လား။
ထိုနည်းတူပင်။ အတိုက်အခံများ၏ နိုင်ငံရေးရာ ကိစ္စများတွင် တစ်ခွန်းတစ်ပါဒမှ လာရောက် ပါဝင် ပြောဆို တိုက်ခိုက်ခြင်း မရှိဘဲ သူ့ဘာသာသူ လူမှု ထောက်ကူ ကိစ္စများ၊ လုပ်လို့ ရနိုင်သလောက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများတွင် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသူ များအား အချို့သော အတိုက်အခံများမှ တိုက်ခိုက် ပြောဆိုခြင်းမှာကော မှန်ကန် နည်းလမ်း ကျပါရဲ့လား။
အရေးကြီးသည်ကတော့ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ကြဖို့ပင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်က ကျွမ်းလောင်ပြီး ပျက်နေသည့် မီးလုံးကို လှေကားထောင် တက်လဲပြီး မီးလုံးသစ် အစားထိုးမည်လား။ (သို့မဟုတ်) အလင်းရောင် ခဏတာ ပေးဖို့ ဖယောင်းတိုင်လေး သွားထွန်း ပေးမည်လား။ နှစ်မျိုး စလုံး သူ့နည်း သူဟန်နှင့်တော့ လောက အလှဆင် နေသူများသာ ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတော့ ရှိပါသည်။ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းမည့်သူကလဲ ထွန်းပေးနိုင်သည်မှာ ခဏတာပဲ ဆိုသည့် သဘောကို နားလည် ရပေမည်။ မီးလုံးလောက်တော့ လင်းလာမှာ မဟုတ်တာကို သဘောပေါက် ရပေမည်။ ထို့အတူ မီးလုံးတက်လဲမည့် သူကလဲ အချို့သော နေရာများမှာ ဖယောင်းတိုင် အလင်းလေးတွေ ယာယီ လိုအပ်သည်ကို နားလည် ရပေမည်။ ကိုယ် မှန်တယ်၊ သူ မှန်တယ် ငြင်းစရာ မလိုပါ။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် ထိရောက်စွာ လုပ်ဖို့သာ လိုအပ်သည်။
မီးလုံးလဲမည် ဆိုပြီး တက်ရမည့် လှေကားကို ဟိုအမှတ်တံဆိပ်ပါ လှေကား၊ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ပါ လှေကား ရွေးနေခြင်း၊ လှေကား ပေါ်တက်မည့်သူကို ဟိုတီရှပ် တံဆိပ်၊ ဒီတီရှပ် တံဆိပ် ၀တ်တက်ပါ လုပြော နေခြင်း၊ တစ်ယောက်က တက်မည် လုပ်သည်ကို နောက်တစ်ယောက်က ဆွဲချခြင်း၊ မီးလုံးပျက်အား လက်ညှိုးထိုးပြပြီး လုပ်စားနေခြင်းများ မရှိလျှင်တော့ မီးလုံးလဲမည့် သူများမှ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် လုပ်နေသည် ဆိုနိုင်ပါသည်။
ထိုနည်း လည်းကောင်းပင်။ ဖယောင်းတိုင် ၀ယ်ရန် အကြောင်းပြပြီး ပိုက်ဆံ တောင်းစား နေခြင်း၊ ပြည်ပ စေတနာရှင်များ၏ ထောက်ပံ့ကြေးများကို အာဏာပိုင်နှင့် ပေါင်း၍ ဝေစားမျှစား လုပ်ခြင်း၊ မီးလုံးသာ လဲနိုင်သွားလျှင် ကိုယ့်နေရာ ပျောက်မည် စိုး၍ လိုက်လံ ပိတ်ဆို့ တားဆီး နေခြင်း၊ ဖယောင်းတိုင် မီးညှိရန် စေတနာတရား အမှန်တကယ်လဲ မရှိပါဘဲနှင့်၊ တကယ်လဲ မီးညှိရန် ကြိုးစားနေခြင်း မရှိပါဘဲနှင့် မိမိ နာမည်ရရေး အတွက် မီဒီယာများ ပေါ်တက်ပြီး အသံကောင်း ဟစ်နေခြင်း စသည်များ မရှိလျှင်တော့ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းသူများမှ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် လုပ်နေသည် ဆိုနိုင်ပါသည်။
ထိုအချက်များကို တွေးနေမိရင်း သူမ ထိုင်နေရာမှ အသာ ထလိုက်ပါသည်။ ပျက်ယွင်းနေသော လျှပ်စီးမီးလုံးလေးကို လဲရပါဦးမည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခဏတာ အလင်းရောင်ပေးသည့် ဖယောင်းတိုင်လေး များကိုလဲ သူမ ကျေးဇူးတင် နေမိပါသည်။
Posted by Khin Ma Ma Myo3comments
Labels: Health policy, Poverty
C-Box မေးခွန်းများအတွက် အဖြေများ (၁)
တင်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေနဲ့ မဆိုင်ပဲ စာဖတ်သူတွေက C-Box မှာ သီးသန့် လာမေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေထဲက C-Box မှာ ဖြေဖို့ နေရာမဆံ့နိုင်တဲ့ မေးခွန်း တချို့နဲ့ အရင် မဖြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ မေးခွန်းဟောင်းတချို့ကို စုပေါင်းပြီး ပို့စ်တစ်ခု အနေဖြင့် မေးခွန်း မေးသူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖြေထားတဲ့ အဖြေတွေက ကျွန်မ လက်လှမ်းမီသလောက် တင်ပြထားတာသာဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံလုံလောက်မှု ရှိနိုင်မည် မဟုတ်တဲ့အတွက် မပြည့်စုံမှု (သို့) ချွတ်ယွင်းမှု တစ်ခုခု ရှိနေပါက စာရေးဖော်တွေ အပါအ၀င် မည်သူမဆို ဖြည့်စွက် ဖြေကြားပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးပေးခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ မေးခွန်းမေးသူများ အနေဖြင့်လည်း ဖြေထားသည်များကို မရှင်းလင်းပါက ထပ်မေးနိုင်ကြောင်းနှင့် ဒီလို ထပ်မေးလာရင်လဲ
၀ိုင်းဝန်း ဖြေကြားပေးဖို့ကို စာရေးဖော်တွေ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကိုသက် ။ ။ မျက်ကွင်း အရမ်းညိုတာဘာကြောင့်လည်းဆိုတာသိပါရစေဆရာ။
မျက်ကွင်းညို ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းတွေက- - မျိုးရိုးကြောင့် - Allergy (ဓာတ်မတည့်မှု ရှိခြင်း)- အိပ်ရေး မ၀ခြင်း- နှာပိတ်ခြင်း- ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေဓာတ်ဆုံး ရှုံးခြင်း (ဥပမာ။ ။၀မ်းလျှောခြင်း ၊ အန်ခြင်း.... စသည်တို့ကြောင့်)- သံဓာတ်ချို့တဲ့၍ သွေးအားနည်းခြင်း- အသက်ကြီးလာခြင်း- စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း- အာဟာရ လုံလောက်စွာ မစားသောက်ခြင်း- ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း- အလွန်အကြူး ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားခြင်း- Vitamin –K ဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း- အရမ်း နေရောင် အထိခံခြင်း ကုသမှုကတော့-မိမိမှာ အထက်က ပြဿနာတွေ ရှိနေရင် အဲဒါတွေ ကိုပြုပြင်ဖို့ ၊ ကုသဖို့ လိုပါတယ်။ Hydrating Facial mask ကို တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ခန့် အသုံးပြုခြင်း ၊ သခွားသီးပါးပါး
အ၀ိုင်းလေးများကို မျက်လုံးနားတွင် ကပ်ခြင်း(တစ်ခါလျှင် ၁၀မိနစ်ခန့်) ၊ မနက်နှင့် ညတွင် ရေအေးအေးဖြင့် မျက်နှာသစ်ခြင်း ၊ အာဟာရပြည့်ဝစွာ စားသောက်ခြင်း ၊ ဂေါ်ဖီ ၊ လိမ္မော် ၊ သခွားသီး၊ စတော်ဘယ်ရီ စသော လတ်ဆတ်သော အသီးအရွက် များများစားခြင်း ၊ ကောင်းကောင်း အနားယူခြင်း ၊ Vitamin–K နှင့် ရှားစောင်းလက်ပတ် ပါဝင်သော Eye cream မျိုးကို လိမ်းခြင်း၊ မသက်သာလျှင် အရေပြား ဆရာဝန်နှင့် ပြသတိုင်ပင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ (Dr စိုင်းဝေအောင်)
Khinethin ။ ။ လေဖြတ်တာ အကြောင်း ဆောင်းပါး ရေးပါဦး။ နောက် အေးတဲ့ဒေသမှာ နေရင် ဘယ်လို ကျန်းမာရေး အကာအကွယ် လုပ်ရမလဲ။ ရေချိုးတာတို့ အစားစားတာတို့ နောက်ဘယ်လိုနေသင့်သလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လေဖြတ်ခြင်းမှာ အဓိကကတော့ ဦးနှောက်ကို ပို့ပေးနေတဲ့ သွေးကြော ပိတ်ဆို့ပြီး ဦးနှောက် တစ်ရှူးတချို့ ပျက်စီးသွားလို့ ဦးနှောက်မှာ အောက်စီဂျင် အထောက်အပံ့ မရတော့တဲ့အတွက် ဦးနှောက် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဦးနှောက်ကြား အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတော့ ဦးနှောက်က သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းကို ထိန်းချုပ်လို့ မရဖြစ်သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း အလုပ်မလုပ်နိုင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘယ်လိုအမျိုးအစား လေဖြတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေဖြတ်တဲ့သူ အားလုံးကတော့ နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မဖြစ်ဖို့ အတွက်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေ မ၀င်နိုင်အောင် ကျန်းမာရေးကို ပုံမှန်အတိုင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် အစာအဟာရ မျှတဖို့၊ အ၀မလွန်အောင် ကာကွယ်ဖို့နဲ့ လှုပ်ရှားမှုရှိနေဖို့ အမြဲလိုအပ်ပါတယ်။
ကုသမှုကို ပြန်လည် ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (Rehabilitations) တွေ လုပ်ရင် ဦးနှောက် တစ်ရှူးပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု အနည်းအများအပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းအကျဉ်း ဒါမှမဟုတ် လုံးဝ ပြန်လည် သက်သာ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်မလုပ်နိုင် ဖြစ်သွားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်းက ကွဲပြားတဲ့အတွက် တွေ့ဖို့လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေကလည်း ကွဲပြားပါတယ်။ ဥပမာ စကားပြောမရ၊ စကားပြောမပီ ဒါမှမဟုတ် အစာမျိုရခက် ဖြစ်သွားရင် လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် Speech Pathologist နဲ့ Dietician ကို တွေ့ရမယ်။ ကိုယ်ကာယ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း မသန် ဖြစ်သွားရင် Physiotherapist နဲ့ Occupational therapist ကို တွေ့ရမယ်။ လေဖြတ်တဲ့ အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေနဲ့ တွေ့ပြီးရင် အိမ်မှာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ဖို့ နေ့စဉ် ကိစ္စတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက် အသေးစိတ်ကို သင်ပြပေးလိမ့်မယ်။ Khinethin က မြန်မာပြည်ထဲက လူနာအတွက် မေးတယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို Rehabilitation Services တွေ ရှိမရှိ ကျွန်မ အတိအကျ မသိတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးကတော့ ဆက်လုပ်သင့်တာကို လေဖြတ်လို့ ဆေးရုံတက်တုန်းက အဓိက တာဝန်ယူ ကုသပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြန်တိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို သီးသန့် မတင်နိုင်သေးတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။
Ko Zaw ။ ။သွေးပျစ်တဲ့ ရောဂါကို ဘယ်လို ကုသရပါသလဲ။ ထိုရောဂါအကြောင်း ပြောပြပေးစေလိုပါသည်။
သွေးပျစ်ခဲတာက သွေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Chemical တွေ မမျှတလို့ ဖြစ်နိုင်သလို သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ သွေးယိုစီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Clotting Factor ခေါ် သွေးထဲမှာရှိတဲ့ အင်ဇိုင်းတွေ ပုံမှန်ထက် ပိုများနေလို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းရုံနဲ့ မသိနိုင်ပဲ သွေးစစ်ပြီး သွေးထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးကို ရေတွက်ခြင်း (Full blood Count) နှင့် Clotting Factors တွေရဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီးမှ သိနိုင်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ မမျှမတ ဖြစ်နေရင် မျှတအောင် ကုသရမယ်။ Clotting Factor တွေ လွန်ကဲနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ Anticoagulant လို့ ခေါ်တဲ့ သွေးကို မခဲစေနိုင်တဲ့ ဆေးတွေကို ဆရာဝန် ညွန်ကြားချက်အတိုင်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ သွေးပျစ်လွန်းခြင်းနှင့် ကျဲလွန်းခြင်း နှစ်ခုစလုံးက အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသာ လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
Uranusaquarian ။ ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် မီးယပ်ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကိုရော မေးမြန်းလို့ ရပါသလားရှင်။
အမျိူးသမီးတွေ မီးယပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တချို့ကို Labels အောက်က Reproductive Health ကိုနှိပ်လိုက်ရင် အဲဒီထဲက ပို့စ်တွေထဲမှာ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ အဲဒီထဲမှာမပါလို့ မေးခွန်းသီးသန့် ထပ်မေးရတော့ မေးတဲ့မေးခွန်းအပေါ် မူတည်ပြီး ဖြေပေးလို့ရပါတယ်။
mr.lupay။ ။ B ပိုးကါကွယ်ဆေးထိုးနည်းနဲ့ မအောင်ရင် ဘာဆက်လုပ်ရလဲ ဆိုတာလေးနဲ့ လိပ်ခေါင်းရောဂါ အကြောင်းတွေကို အပြည့်အစုံ ရှင်းပြပေးပါရန် တောင်းဆိုပါတယ် အစ်မ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းကို မဖြေခင် labels အောက်က Hepatitis ခေါင်းစဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပို့စ်သုံးခုကို အရင်သွားဖတ်ဖို့ Mr Lupay ကို အကြံပြုချင်ပါတယ်။
Hepatitis B အတွက် ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်ဆေး ရှိပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးကို စနစ်တကျ ထိုးထားရင် ကူးဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေး စနစ်တကျ ထိုးရမယ့် နည်းလမ်းကတော့ အကြမ်းဖျင်းဆိုရင် ၀-၁-၆ လို့ မှတ်သားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဆေး သုံးကြိမ် ထိုးရမယ်။ ပထမ တစ်ကြိမ်ထိုးပြီးရင် ဒုတိယ တစ်ကြိမ်ကို ၁ လ ခြားပြီး ထိုးရပါမယ်။ တတိယ အကြိမ်ကို ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ ၆ လ ခြားပြီး ထိုးရပါမယ်။
ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးတိုင်း အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုးကို ရာနှုန်းပြည့် ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ၉၀ရာခိုင်နှုန်း လောက်တော့ ကာကွယ်တယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်။ တိတိကျကျ သိချင်ရင်တော့ ရောဂါ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အင်အား (Antibody titer) ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတာကို တိုင်းရပါတယ်။ အဲဒီလို တိုင်းလို့ ဆရာဝန်က စိတ်တိုင်းမကျရင် စတုတ္ထအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး တစ်လုံး ထပ်ထိုးရတတ်ပါတယ်။
အသည်းရောင် အသားဝါ B ရုတ်တရက် (Acute) ရရှိပါက ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အဖျားဝင်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ၀မ်းသွားခြင်း အဆစ်အမြစ်နဲ့ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း တစ်ခါတစ်ရံ အရေပြား ယားယံခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေကို တွေ့နိုင်ပြီး ဒီလက္ခဏာတွေပဲ ထိန်းချုပ်လို့ရပြီး ရောဂါအတွက် သီးသန့်ဆေး မရှိပါဘူး။ အစာအာဟာရ လက္ခဏာထိန်းချုပ်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့ကု အနားယူပြီး နှစ်ပတ်၊ သုံးပတ်အတွင်း သက်သာပျောက်ကင်း သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါရတဲ့ ဆယ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်နှုန်းခန့် နာတာရှည် (Chronic) ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နာတာရှည် အသည်းအရာင် အသားဝါ ရထားသူဟာ အသည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တခြား ဆက်ပွားရောဂါတွေ ၀င်ဖို့ သိပ်ကို နီးစပ်လို့ အထူး ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ အစာအာဟာရကို အသားဓာတ် အလွန်အမင်း မစားဘဲ အရက်ကို လုံးဝ ရှောင်သင့်ပါတယ်။ နေမကောင်းမှ ဆရာဝန်ပြခြင်း မဟုတ်ပဲ ဆရာဝန်နှင့် တစ်နှစ် ဘယ်နှစ်ကြိမ် တွေ့မယ်ဆိုတာ တိုင်ပင်သတ်မှတ်ပြီး အမြဲတမ်း ညွန်ကြားမှုခံယူ၊ အနေအထိုင် အစားအသောက် ဆင်ခြင်ရင် ရောဂါမရှိသူ နီးပါး နေသွားနိုင်ပါတယ်။
လိပ်ခေါင်းရောဂါနဲ့ Hepatitis B တိုက်ရိုက် ပတ်သက်မှုတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အသည်းက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အကြီးဆုံး အတွင်းအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး တခြား ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း အားလုံးနီးပါးနဲ့ ဆက်စပ် အလုပ်လုပ်ရတော့ အသည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တိုင်း တခြား ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ထိခိုက်မှု ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသည်းက အစာအိမ်မှ ပို့လာတဲ့ အာဟာရတွေကို ပြန်လည် စိစစ်ပြုပြင် နေရာချပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ နှလုံးကို ရောက်အောင် ပို့ပေးရတော့ ရောဂါတခုခုကြောင့် အသည်း အလုပ်လုပ်မှု အားနည်းသွားတာနဲ့ အစာခြေဖျက်မှု စနစ်နဲ့ အစာပို့ဆောင်မှု စနစ်မှာလည်း အားနည်းသွားပါတယ်။ လိပ်ခေါင်းရောဂါ အကြောင်းကို နောက်ပိုင်း အချိန်ရရင် သီးသန့်ပို့စ်တစ်ခု တင်ပေးပါမယ်။
Linn ။ ။ သွား အနည်းငယ်ခေါနေတာကို ပြင်ချင်ပါတယ် သွားပြင်ရင် အကျိူးအပြစ် ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သွားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကို ၀န်ဆောင်တဲ့ Professionals သီးသန့်ရှိလို့ တခြား Health Care Professionals တွေအနေနဲ့ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ မထင်ဘူး။ သွားကို ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ Dental Surgeon တွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း လူနာကိုယ်တိုင်ကို တွေ့ပြီး ပြုပြင်ရမည့် အခြေအနေ လူနာရဲ့ သွားဖုံးနဲ့ သွားအရင်းရှိ အရိုး တည်ဆောက်ပုံ အနေအထားတွေကို အတိအကျ စစ်ဆေးပြီးမှ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့က သွားကိုပဲ ပြန်တည့်မတ်ပေးဖို့ လိုပြီး တချို့ကျတော့ အရိုးကွင်းကိုပါ ပြုပြင်ရတာ ရှိတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ပြုပြင်ရမည့် အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်ကာလနဲ့ အကျိုးအပြစ်တွေက ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ အခြေခံ ကျန်းမာရေးကို အစိုးရက တာဝန် ယူတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတောင် Dental Health အတွက် မိမိပိုက်ဆံနဲ့ အိတ်စိုက် အသုံးပြုရပါတယ်။ ပြီးတော့ Dental Health က တခြား ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေထက် ပိုပြီး ဈေးကြီးပါတယ် ရိုးရိုး Dentist ကို တခါတွေ့ရင်တောင် အထွေထွေ ဆရာဝန်ကို တခါတွေ့တာထက် ပိုဈေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ ဒါကြောင့် သွားအလှပြုပြင်တဲ့ Dental Surgeon ဆီက Information pack ဒါမှမဟုတ် Leaflet တွေကို အရင် ဖတ်ကြည့်ပြီး မိမိပြုပြင်ရမည့် အခြေအနေကို အကြမ်းဖျင်းတော့ သိအောင် အရင်လုပ်ပါ။ ပြီးတော့မှ Dental surgeon နဲ့တွေ့ ကိုယ် သိချင်တာ မေးပြီး တိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ကျွန်မ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
အဖြေများကို ဖတ်ရန် "Read More ..." ကို နှိပ်ပါ။
Posted by Nge Naing 35 comments
Labels: Blood, Dental health, Hematology, Hepatitis, Hepatitis B, Liver, Q and A, Reproductive Health, Stroke
Post-Nargis Recovery and Preparedness Plan
နာဂစ်အလွန် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရေး အစီအစဉ်
အစိုးရ၊ အာဆီယံနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့ ပါဝင်သော သုံးပွင့်ဆိုင် အဖွဲ့က နာဂစ်အလွန် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရေး အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ၄င်းအစီအစဉ်မှာ အချိန်ကာလ ၃ နှစ် (၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီ မှ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ အထိ) ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ခန့် ကုန်ကျနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းကို အောက်တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
The Post-Nargis Recovery and Preparedness Plan (PONREPP) outlinesathree-year recovery strategy for the areas affected by Cyclone Nargis, which struck Myanmar on 2-3 May 2008 and resulted inalarge loss of life and significant destruction in Myanmar’s Ayeyarwady Delta region. The report consists of four parts plus annexes:
An overview (Chapter I) which presents core recovery issues includingareview of the national, regional and international humanitarian responses over the six months following Cyclone Nargis, the nature of livelihoods and vulnerabilities in the cyclone-affected area, the strength of community-led recovery efforts, and the sequencing and funding of recovery interventions.
A presentation of the Government’s recovery plan (Chapter II), which the PONREPP complements.
Three chapters (III, IV, and V) which present situational overviews by sector and the PONREPP’s proposed sectoral recovery responses over the next three years, grouped under the broad themes of productive lives (Chapter III), healthy lives (Chapter IV), and protected lives (Chapter V).
The proposed implementation architecture for PONREPP (Chapter VI), covering strategic and operational coordination, assistance flows and aid tracking, and impact monitoring and transparency.
An annex which schematically presents - by operational sector - the principal objectives (or outcomes), and outputs and timelines for their achievement, as well asabreakdown of estimated costs.
The overview presents the destruction and damage caused by Cyclone Nargis, which severely affected 2.4 million people in the Delta and killed an estimated 140,000. The chapter reviews the causes of the population’s vulnerabilities, and the characteristics of vulnerabilities today in order to identify priorities for the recovery effort. These include the rapid re-establishment of adequate livelihoods to reactivate economic life and prevent deeper debt cycles that have begun to affect many farmers, fishermen, labourers and small enterprises. It underlines the importance of cash grants and micro-credit as components of recovery assistance. The chapter also highlights the urgent need to continue the construction of improved household and community shelters, as well as disaster risk reduction initiatives, before the onset of the next cyclone season in May 2009. It discusses important fragilities which could become more evident during 2009, as well as the importance of strong community involvement (i.e. at the village and township level) in identifying recovery priorities and designing and implementing activities. Finally, the overview presents the resource requirements of the recovery programme, in addition to the very considerable national efforts. This results from an identification of overall medium term needs estimated at up to US$ 800 million, adjusted in the light of likely absorptive capacity limitations within the next three years.
The Government’s reconstruction plan was issued by the national Natural Disaster Preparedness Central Committee (NDPCC) in August, and is currently being implemented byarange of sectoral ministries. In the aftermath of the cyclone, the Government established Township Coordination Committees (TCCs) across the affected area to coordinate the humanitarian response, and these TCCs are expected to continue their functions in the recovery phase. The proposals made in the PONREPP complement the Government’s response, and this chapter presents that response in greater detail, including the distribution of emergency relief material and making available essential productive equipment to restore farming and fishing activities, while initiating major programmes to restore the physical infrastructures of the Delta.
The recovery plan proposed under the PONREPP is grouped into three chapters withapeople-centered vision: productive lives (Chapter III), healthy lives (Chapter IV), and protected lives (Chapter V). These chapters address operational programmes across eight sectors: livelihoods, shelter, education, health, water/sanitation, disaster risk reduction, environment, and protection.1 Each sector presentsamedium-term recovery strategy building on an analysis of the present situation andadiscussion of core challenges and the key recovery outcomes sought. Sector-specific implementation modalities are outlined where these are needed in addition to the general approach for PONREPP implementation presented in Chapter VI. There is thenasummary of financing needs per outcome, which are presented in greater detail in the annex.
The sectoral plans were developed in October/November 2008 by sectoral working groups that included participation from technical ministries, UN agencies, international and national NGOs, and the donor community. The working groups met over several weeks so as to reach mutual understanding and endorsement. At the end of the process the sectoral drafts were edited for presentation in this document.
Chapter VI presents the proposed implementation architecture for the recovery plan, aiming to build on what worked well in the emergency and early recovery phase and taking into account other mechanisms relevant to the recovery effort, including the proposed multi-donor trust fund for livelihoods and food security.2 A “Recovery Trust Fund” is proposed to serve asachannel for PONREPP-targeted support to meet identified gaps and thus complement other mechanisms.3 It is important that the Tripartite Core Group (TCG), orasimilarly effective mechanism, continue its policy and monitoring role during the recovery phase.
The proposed architecture includesaRecovery Forum (RF) asadeliberative body with wide stakeholder membership, meeting every two or three months. It is intended that its recommendations carry weight. A Recovery Coordination Centre (RCC) will serve both the RF and the TCG asatechnical unit for information, data collection, and analysis, streamlining current efforts in these areas and adding further expertise. The RCC will be in close contact with recovery field hubs (RH), building on the hub structure developed during the emergency response to strengthen two-way information flows with the field. In so doing it is likely to be helped by the on-going thematic cluster system. The recovery field hubs would give technical support to the TCCs, to strengthen existing coordination structures in the recovery phase at both townships and village level, while recognising, encouraging and learning from enhanced community level decision-making and implementation. The detailed elaboration of several key elements of this architecture will need thorough consultation with the concerned parties in early 2009 before their precise modalities can be formalised.
The annex translates the narrative text of Chapters III-V by presenting Results Frameworks for each sector. These frameworks present the broad outcomes sought in each sector over three years and provide baseline information, both for the situation immediately after the cyclone and the current situation, thus reflecting the progress made. The frameworks outline the outputs needed to achieve the identified outcomes, and timelines for their achievement divided into three periods: the first half of 2009, the second half of 2009, and over the two years 2010-2011, providing cost estimates for each of the three periods.
Each chapter aims to contain enough information to be used on its own at the working level. This means that when the document is read cover-to-cover, certain core ideas may appear in more than one chapter.
The PONREPP is an indicative plan, notafully-elaborated programme. At this stage the purpose is to give sufficient information - descriptive, analytical, and practical - to allow the international community to consider its ability to respond to the medium-term needs of those who suffered and survived Cyclone Nargis, and to review the activities which such assistance can support. As implementation proceeds, it is likely that the PONREPP will need to be reviewed and updated, initially perhaps early in the fourth quarter of 2009.
Report cover, content, and executive summary
Posted by Ye-Mon 1 comments
Labels: Disaster, Nargis, Relief, Report
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စကားလုံးများ
စာလေးမှာ စိုးရိမ်မိပေမယ့် နောက်ပိုင်း ရေးသားမယ့် စာတွေ အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ဖို့ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးရဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စကားလုံးတွေကို စုဆောင်း ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ရာမှာ စာထောင့်နေခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ် မပြည့်စုံ ကွဲလွဲခြင်းများ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ စာရှုသူ အနေဖြင့် ပိုမို သင့်လျော်မည် ထင်သော ဘာသာပြန်ချက်များ ရှိပါက မှတ်ချက်တွင် ရေးသား ပေးသွားရန် တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
ကလေး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကြားတွင် မိမိ လိုချင်သော အချိန်ကာလ တစ်ခု ခြားထားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
သန္ဓေတားခြင်း၊ ကိုယ်ဝန် မရအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
ခေတ်ပေါ်နည်း (သို့) ရှေးရိုးနည်းများ သုံးစွဲ၍ ကိုယ်ဝန် မရအောင် ပြုလုပ်ခြင်း။
စကားချပ် ။ ။ သားဆက်ခြားခြင်းနှင့် သန္ဓေတားခြင်းမှာ အဓိပ္ပါယ် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။
ပဋိသန္ဓေ တားဆေး၊ တားနည်းများ
ကိုယ်ဝန် မရအောင် အသုံးပြုသော ခေတ်ပေါ် တားဆေး၊ ထိုးဆေး၊ သားအိမ်တွင်းထည့် ပစ္စည်း၊ ကွန်ဒုံး အစရှိသည်တို့ကို စုပေါင်း ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
မိသားစု စီမံကိန်း (တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ထားသည်ဟု ထင်ပါသည် - စာရေးသူ။)
သားဆက်ခြားခြင်း အပါအ၀င်၊ ကာလသား ရောဂါ ကာကွယ်ခြင်း၊ အိမ်ထောင် မပြုမီ ဇနီးမောင်နှံလောင်းများ ဆေးစစ်ခြင်း၊ ကလေးမရရှိသောကြောင့် ကုသမှုပေးခြင်း အစရှိသည့် ဆောင်ရွက်ပေးမှုများကို စုပေါင်း ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သားဆက်ခြားခြင်း (Birth Spacing) နှင့် မိသားစု စီမံကိန်း (Family Planning) ကို အတူတူ သဘောထား သုံးစွဲတတ်ကြသည်။ တိတိကျကျ ပြောရလျှင် မတူပေ။ သားဆက်ခြားခြင်းမှာ မိသားစု စီမံကိန်း၏ အကိုင်းအခက် တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်သည်။
စကားချပ် ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် “မိသားစု စီမံကိန်း” ဟူသည့် စကားကို အသုံးပြု ခဲသည်။ သားဆက်ခြားခြင်း၊ သားဆက်ခြား စီမံချက် စသည်ဖြင့်သာ သတင်းစာ၊ အစီရင်ခံစာများတွင် ထည့်သွင်း ရေးလေ့ရှိသည်။ လူကြီးသူမများ၏ အဆိုအရ မိသားစု စီမံကိန်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “လူဦးရေ ထိန်းချုပ်ခြင်း” ဟု သဘောပေါက် စေသောကြောင့် လူဦးရေ ထိန်းချုပ်ခြင်းကို မနှစ်သက်သော လူကြီးမင်းများ အမျက်တော် မရှအောင် ရှောင်ကွင်း ရေးသားကြလေသည်ဟု ဆိုသတတ်။
မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး၊ မျိုးပွား ကျန်းမာရေး
ဒီစကားလုံးကတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ် အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူဦးရေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ညီလာခံ (ICPD – International Conference on Population and Development) နောက်ပိုင်းမှာ ခေတ်စားလာခဲ့တဲ့ စကားစုပါ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့က အောက်ပါအတိုင်း တိတိကျကျ အဓိပ္ပါယ် ဖော်ပေးထားပါတယ်။
"A state of physical, mental, and social well-being in all matters relating to the reproductive system at all stages of life. Reproductive health implies that people are able to haveasatisfying and safe sex life and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when, and how often to do so. Implicit in this are the right of men and women to be informed and to have access to safe, effective, affordable, and acceptable methods of family planning of their choice, and the right to appropriate health-care services that enable women to safely go through pregnancy and childbirth."
မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဟာ သားဆက်ခြားခြင်း နဲ့ မိသားစုစီမံကိန်းဆိုတဲ့ စကားစုတွေထက် ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ အဓိက အချက်တွေကို ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင် ..
အသက်အရွယ် ကျား မ မရွေး မျိုးပွားအင်္ဂါများ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့
လူသားတို့ ဘာဝဖြစ်သော ဖို-မ ကိစ္စကို ရောဂါကင်းကင်း ဘေးရှင်းရှင်းဖြင့် စိတ်ကျေနပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့
ကလေး ယူမည်၊ မယူမည် ဆိုသည်ကို၎င်း၊ မည်မျှ ယူမည် ဆိုသည်ကို၎င်း၊ မည်သည့်အချိန်ယူမည် ဆိုသည်ကို၎င်း မိမိသဘောဆန္ဒ အလျောက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိစေဖို့
အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတိုင်း မိသားစု စီမံကိန်းပါ နည်းလမ်းများကို သိရှိခွင့်၊ ရယူပိုင်ခွင့် ရှိဖို့
အမျိုးသမီးများ အသက် အန္တရာယ် ကင်းစွာ ကလေး မီးဖွားနိုင်ဖို့
ဆိုတဲ့ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါတယ်။
စကားချပ် ။ ။ မိသားစု စီမံကိန်းရယ်၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ “ကျန်းမာရေး” အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်ရယ်၊ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းရယ်ကို ရောသမ မွှေလိုက်ရင် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးကို ရရှိပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ် စာတမ်းမှာ ကတည်းက မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ရပိုင်ခွင့်ကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းမှာ အတိအလင်း ထည့်သွင်း ဖော်ပြ နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ၁၉၆၈ ခုနှစ် အီရန်နိုင်ငံ တီဟီရန်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း ဆိုင်ရာ ညီလာခံကျမှ တိတိကျကျ ဖော်ပြလာပြီး ၁၉၇၄ခုနှစ်ကျမှ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံကနေ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စကားလုံး အတိအကျ ကိုတော့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ ၀က်ဆိုဒ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး ရပိုင်ခွင့်များသည် လူတစ်ဦးချင်းနှင့် လင်မယားစုံတွဲတို့၏ အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်များ ပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ လူတစ်ဦးချင်းနှင့် လင်မယားစုံတွဲတို့သည် ကလေး ယူမည်၊ မယူမည် ဆိုသည်ကို၎င်း၊ မည်မျှ ယူမည် ဆိုသည်ကို၎င်း၊ မည်သည့်အချိန် ယူမည် ဆိုသည်ကို၎င်း မိမိ သဘောဆန္ဒအလျောက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ပညာပေး အချက်အလက်များနှင့် အကူအညီများကို ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လိင်နှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် စေရမည်။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ မလျော်သြဇာ သုံးခြင်းနှင့် ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခံရခြင်းတို့မှ ကင်းဝေးစွာဖြင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချခွင့် ရှိသည်။
Production ofalive birth (natality)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး အချိန်တန်သောအခါ ကလေးကို အရှင် မွေးဖွား ပေးနိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
Inability to producealive birth
ကလေး အရှင် မမွေးဖွား နိုင်ခြင်း
Physiological capacity to conceive (reproductive potential)
ပဋိသန္ဓေ ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ခြင်း။
ပဋိသန္ဓေ ဆောင်နိုင်ခြင်းလို့ ဆိုထားတဲ့အတွက် ၄င်းကိုယ်ဝန် အဖတ်တင်သည် ဖြစ်စေ၊ အဖတ်မတင်သည် ဖြစ်စေ အကျုံးမ၀င်တော့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် Fecund ဖြစ်သော်လည်း Fertile ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပေမည်။ ဤစကားလုံးမှာ လူဦးရေဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ (Demographers) အသုံးများသော စကားဖြစ်သည်။
Inability ofawoman to conceiveapregnancy
ပဋိသန္ဓေ မဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ခြင်း။
စကားချပ်။ ။ ကလေး အရှင်မွေးဖို့ နေနေသာသာ ကိုယ်ဝန်ပင် မရရှိနိုင်သော အခြေအနေကို ဆိုလိုရင်း ဖြစ်သည်။ Infertility နှင့် အဓိပ္ပါယ် ကွာခြားကြောင်း သတိပြုပါ။ Infertility ဟု ဆိုလျှင် ထိုအမျိုးသမီးသည် ကိုယ်ဝန်တော့ ရလိုက်သေးသည်။ ကလေးသာ အဖတ်မတင် (သို့) အရှင် မမွေးခြင်းသာလျှင် ဖြစ်သည်။
Probability thatawoman will conceive duringamenstrual cycle
အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဓမ္မတာလာချိန် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ကြားကာလ၌ ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ခြေ မည်မျှ ရှိသည်ကို ပြသော ကိန်းဂဏန်း။ (ဖြစ်တန်ကိန်း)
သဘာဝအလျောက် ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျခြင်း။
သဘာဝအလျောက် မဟုတ်ဘဲ လူတစ်ဦးဦးက နည်းလမ်း တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျစေအောင် ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျခြင်း။ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချခြင်း။
စကားချပ်။ ။ ဆေးပညာ အသုံးအနှုန်း (Medical term) နှင့် သာမန် အင်္ဂလိပ် အသုံးအနှုန်း (Layman English) ကွာခြားမှု ရှိကြောင်း သတိပြုပါ။ ဆေးပညာ လောကတွင် ကိုယ်ဝန် အရွယ်အစား ပေါ်မူတည်၍ ကိုယ်ဝန် နုလျှင် Miscarriage ကိုယ်ဝန်ရင့်လျှင် Abortion ဟု ခွဲခြားပြောဆိုသည်။ သို့ရာတွင် သာမန် အင်္ဂလိပ် အသုံးအနှုန်း အနေဖြင့် ဆိုလျှင် Abortion ဟူသည် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း ဖြစ်ပြီး Miscarriage သည် အလိုအလျောက် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း ဖြစ်သည်။
ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားချက် မရှိဘဲ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း။
ဥပဒေ ခွင့်ပြုထားချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံ တော်တော်များများတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို ဥပဒေ အကန့်အသတ်ဖြင့် ခွင့်ပြုတတ်ကြသည်။ ထိုသို့ ဥပဒေကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီသော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဥပဒေတွင် မတရား ပြုကျင့် ခံရခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော ကိုယ်ဝန်ကို တရားဝင် ဖျက်ချ ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
မကျွမ်းကျင်သူများက ဆောင်ရွက်သော ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချမှု။
ကျွမ်းကျင်သူများက ဆောင်ရွက်သော ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချမှု။
Family Planning Policies and Programs lecture notes
Posted by Ye-Mon 10 comments
Labels: Abortion, Contraception, Definition, Family Planning, Reproductive Health
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆရာတစ်ယောက် ပြောတဲ့ မှတ်သားစရာ စကားလေးကို ပြန်ဝေမျှ ချင်ပါတယ်။အဲဒါက "လူတွေကို အမှား လုပ်ဖို့ ခက်အောင် လုပ်ပေးပါ။ ပြီးတော့ အမှန်လုပ်ဖို့ လွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးပါ" တဲ့။
ဥပမာ ပြောရရင် ဆေးလိပ် မသောက်ရတဲ့ နေရာ သတ်မှတ်တာမျိုးလို့ ပြောလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။
ပြည့်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ ချည်းကပ်နည်းတွေကို upstream နဲ့ downstream ဆိုပြီး ဥပမာပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို လူတွေကို အမှားလုပ်ရခက်အောင် လုပ်တာမျိုးက upstream ထဲမှာ ပါပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ upstream နဲ့ downstream အကြောင်းကို ပြောထားတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုလဲ ပြန်ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ မြစ်ကမ်းနံဘေးမှာ တည်ရှိတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာက ရွာသားတွေက ရေကူး အလွန် ကျွမ်းကျင်ကြပါသတဲ့။ တစ်နေ့မှာ သူတို့က မြစ်ထဲက အော်သံကြားလုိ့ ပြေးကြည့်ကြတော့ လူတစ်ယောက် ရေနစ်နေတာကို တွေ့ရပါသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီလူကို သူတို့တစ်တွေ ၀ိုင်းဆယ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မကြာဘူး။ နောက်ထပ် တစ်ယောက် ရေနစ်နေတာကို သူတို့ တွေ့ရပြန်ရောတဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူတို့တစ်တွေ မနားနိုင်ဘဲ ထပ်ပြီး ကယ်ကြရပြန်တာပေါ့။ အဲဒီလိုပဲ မကြာခင်မှာ နောက်တစ်ယောက် ရေထဲကနေ အကူအညီတောင်းနေတာကို တွေ့ရတော့ သူတို့ ထပ်ကယ်ကြရပြန်ရော။
အဲဒီလို ရေထဲကျတဲ့သူတွေကို တစ်နေကုန် ကယ်ဆယ်နေရတာ သူတို့တစ်တွေ ခြေကုန်လက်ပမ်းတွေ ကျကုန်ကြတဲ့ အထိပါပဲ။ တစ်ချိန်မှာတော့ အဲဒီလို ရေနစ်နေတဲ့သူတွေ ထပ်ပေါ်မလာတော့ဘဲ ရပ်သွားပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့ရွာထဲက ရွာသားတစ်ဦး လေကလေးချွန်ပြီး လျှောက်လာတာတွေ့လိုက်ရတော့ သူတို့က "မင်းက ဘယ်သွားနေတာလဲ၊ ငါတို့ တစ်နေကုန် ရေနစ်တဲ့သူတွေကို ဆယ်နေတာ မင်းက ဘာလို့ မကူညီတာလဲ" လို့ ၀ိုင်းပြီး အပြစ်တင်ကြတာပေါ့။
အဲဒီတော့ အဲဒီရွာသားက "အဲဒီလို လူတစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ရေနစ်နေတာကို တွေ့ရတော့ ငါ့စိတ်ထဲမှာ မြစ်ကို ဖြတ်တဲ့ တံတားမှာ ပြဿနာ တစ်ခုခုတော့ ရှိနေပြီလို့ ထင်တာနဲ့ သွားကြည့်လိုက်တာ။ ဟိုရောက်တော့ အပေါက်ကြီး ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ ငါ အခု အဲဒါကို ပြန်ပြင်လိုက်တော့ လူတွေ ထပ်ပြီး မြစ်ထဲ မကျကြတော့ဘူးပေါ့" တဲ့။
တွေးစရာလေးတွေ ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by tune4comments